Loluphi uhlobo lwesiphumo sokuphucula i-hydroxypropyl methyl cellulose enalo kwikhonkrithi yodaka?
Kwiminyaka yakutshanje, kunye nophuhliso oluqhubekayo lweteknoloji yokufakelwa kwodonga lwangaphandle, inkqubela phambili eqhubekayo yobugcisa bokuvelisa i-cellulose, kunye neempawu ezibalaseleyo ze-HPMC ngokwayo, i-HPMC isetyenziswe ngokubanzi kwishishini lokwakha. Ukuze uqonde indlela yeHP...
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-tile yokuncamathelisa kunye ne-adhesive tile ngasemva?
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-tile yokuncamathelisa kunye ne-adhesive tile ngasemva? I-01,Ukusetyenziswa okwahlukeneyo kwe-adhesive ye-Tile: endaweni yodaka lwesamente yendabuko, i-adhesive ye-tile isetyenziselwa ukuncamathelisa izinto zokuhombisa ezifana neethayile, iithayile zomphezulu, iithayile zomgangatho, njl njl.
Ukuthintela njani ngokufanelekileyo umaleko wokugquma eludongeni lwangaphandle ukuba ungawi?
Inkqubo yokufakelwa kwe-thermal yangaphandle yinxalenye ebalulekileyo yodonga lwangaphandle lwesakhiwo. Ekubeni inkqubo yokugquma i-thermal yangaphandle ine-insulation engcono kunye nefuthe lokugquma kwe-thermal kunenkqubo yangaphakathi yokufakelwa kwe-thermal, oku kunciphisa kakhulu iindleko zokwakha ngelixa ukunyuka ...
Uthini umahluko phakathi kokuzilinganisa ngesamente kunye nokuzilinganisa ngegypsum?
a.Kuyintoni ukuzilinganisa kwesamente? I-Cement self-leveling yinto ekhethekileyo esetyenzisiweyo exutywe namanzi ukuze yenze into engamanzi kunye ne-fluidity ethile, exhomekeke kubunzima ukuze isasazeke ngokukhululekileyo ukwenza inqwelomoya ethe tye, kwaye idibanisa ngokwendalo ibe yindlela yokwakha umgangatho. b. Yintoni...
Injongo kunye nokusetyenziswa kwesakhiwo somgubo wepolymer ophinda uhlakazwe
Injongo kunye nokusetyenziswa kwesakhiwo somgubo we-polymer owenziweyo Ngokukodwa, ukwakha i-emulsion powder edispersible luhlobo lwezixhobo zokwakha, ezidityaniswe nomgubo wokwakha kunye neglue yokukhusela indalo kwindawo ethile. Indlela yokusetyenziswa kwayo ilula, umphumo uyamangalisa ...
Uhlobo olutsha lwefomula ye-gypsum putty ehambelana nokusingqongileyo, uyazi?
I-gypsum wall-scraping putty powder entsha luhlobo olutsha lwesakhiwo esiluhlaza kunye nokusingqongileyo esijongene nezinto zokutyabeka. Yongezwa ngokuthe ngqo ngamanzi kwaye ixutywe ngokulinganayo xa isetyenzisiwe, kwaye udonga lokuhlobisa lubekwe ngendlela yokucoca. Inokusebenza kakuhle kokudibanisa, ukuqina ngokukhawuleza, ...
I-putty esekelwe kwi-Gypsum, i-lime-calcium-based putty kunye ne-samente-based putty, ngaba uye wahlula ngokucacileyo?
I-putty powder yohlulwe kakhulu kwi-gypsum-based putty powder, i-lime-calcium-based putty powder kunye ne-samente-based putty powder ngokwezona zixhobo eziphambili. Uthini umahluko phakathi kwezi ntlobo zintathu zeputty powder? Sikhetha njani uhlobo olufanelekileyo lweputty powder kwi-application ap...
Kutheni ukongeza kwakhona i-polymer powder kwi-putty eludongeni, i-mortars kunye ne-adhesive tile?
ngu admin on 21-08-26
Umgubo wepolymer odispersible uphinda-phinda unyibilike emanzini. Yahlulwe kwi-ethylene / vinyl acetate copolymer, i-vinyl acetate / i-vinyl tertiary carbonate copolymer, i-acrylic acid copolymer, njl. Isebenzisa i-polyvinyl alcohol njenge-colloid ekhuselayo. Thi...
Ingaba izongezo zodaka ezisele zixutyiwe ziphucula njani iimpawu zodaka?
Izongezo ezilungisiweyo ezifana ne-additive-mixed mortar additives, i-cellulose ethers, i-coagulant, i-polymer powder edispersible, i-air entraining agents, i-ejenti yamandla okuqala, i-agent yokunciphisa amanzi, njl., ezongezelelweyo ngokuhambelana neemfuno zeprojekthi. Baphucula kakhulu ukusebenza kwe...
Ziziphi iingongoma ngexesha elibalulekileyo ekwakhiweni kwe-adhesive tile?
ngu admin on 21-08-12
I-adhesive ye-tile yekhwalithi ephezulu kufuneka isebenzise i-Hydroxypropyl methyl cellulose i-HPMC kunye ne-polymer powder edibeneyo. Okwangoku, ekufakeni i-tile yokuncamathelisa, ngawaphi amaxesha ekufuneka sinikele ingqalelo kuwo? Makhe sithethe ngezi zinto kweli nqaku. Bude buphi ubomi beshelufu yokuncamathela kwithayile yeceramic...
Kubaluleke kangakanani ukongeza i-cellulose kwimveliso yodaka kunye ne-gypsum-based?
I-Hydroxypropyl methyl cellulose kudaka lwesamente kunye ne-gypsum-based slurry idlala indima enkulu yokugcina amanzi kunye nokuqina, okunokuphucula ngokufanelekileyo amandla adibeneyo kunye nokuxhathisa i-sag yodaka. Izinto ezinje ngobushushu bomoya, ubushushu kunye nesantya soxinzelelo lomoya ziyakuchaphazela iv...
IHydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) imibuzo engama-20
ngu admin on 21-07-26
I-Industrial-grade hydroxypropyl methyl cellulose esetyenziswa kudaka yahlulwa yi-viscosity. Ngokuqhelekileyo, ezi mpawu zilandelayo zisetyenziswa ngokuqhelekileyo (iyunithi yi-viscosity) I-viscosity ephantsi: i-400 isetyenziselwa ubukhulu becala i-self-leveling mortar, kodwa ithunyelwa ngokubanzi. Isizathu: I-viscosity iphantsi, nangona i ...